ကာလက်၏အမွေခံခြင်း – Full Gospel Assembly
Posted on September 5, 2020 Posted By: FGAMyanmar Categories: Spiritual Food
ကာလက်သည် ယုဒအမျိုးသား ယေဗုန္နာသား (တောလည် ၃၄:၁၉)ဖြစ်၍ ခါနန်ပြည်ကို စူးစမ်းလေ့လာဖို့ရန် ရွေးချယ်ခံရသော ခေါင်းဆောင် (၁၂)
ယောက်ထဲက တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး၊ ဣသရေလလူမျိုးများအတွက် အဓိကခေါင်းဆောင်မဟုတ်သာ်လည်း မောရှေနှင့် ယောရှုတို့၏ ခေါင်းဆောင်မှုကို အဓိက ကူညီပေးသောသူဖြစ်သည်။ မောရှေနှင့် အသက် (၂၀) အထက်ရှိသောဣသရေလလူမျိုးများ ကတိတော်ပြည်ကို မဝင်စားရပဲ လမ်းခရီးမှာ သေဆုံးခဲ့ရကြသည်။(တော ၃၂:၁၂) သို့သော် ယောရှုနှင့်ကာလက်သည် ကတိတော်ပြည်ကို ဝင်စားရပြီး ကာလက်သည် ဟေဗြုန်ပြည်ကို အမွေခံခဲ့သည်။ (ယောရှု၁၄:၁၃)။
ကာလက်သည် ဘာကြောင့် ကတိတော်ပြည်ကို ဝင်စားပြီး အမွေခံရသလဲ?
၁။ ကာလက်သည် ဘုရားသခင်၏ ကတိတော်ကို စွဲလမ်းခြင်းရှိသည်
ဣသရေလလူမျိုးများသည် ခါနန်ုပြည်ရောက်သောအခါ သူတို့အမျိုးအလိုက် နယ်မြေတွေကို သိမ်းပိုက်ပြီး အမွေခွဲကြသည်။ ထိုအချိန်မှာ ကာလက်သည် မောရှေပေးသောကတိတော်ကို လုံးဝမမေ့ခဲ့ဘူး။ ဒါကြောင့် ကာလက်သည် မောရှေအားဖြင့် ဘုရားသခင်ကတိပေးသောစကားကို ယောရှုအားပြန်ပြောခဲ့သည်။
“……ကေနက်အမျိုး ယေဖုန္နာ၏သား ကာလက်က၊ ထာဝရဘုရားသည်ကာဒေရှဗာနာအရပ်၌ ကိုယ်တော်နှင့် အကျွန်ုပ်ကိုရည် ဆောင်၍၊ ဘုရားသခင်
၏လူမောရှေအား မိန့်တော်မူသော စကားကို ကိုယ်တော်သိပါ၏။” (ယေရှု၁၄:၆)
ကာလက်အတွက် ဘုရားသခင်ရဲ့ကတိစကားက ဘာဖြစ်မလဲ? ”
ထိုနေ့ရက်၌မောရှေက၊ သင်သည်ငါ၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားနောက်တော်သို့ လုံးလုံးလိုက်သောကြောင့်၊ အကယ်၍ သင်နင်းပြီးသော မြေသည် အစဉ်အဆက် သင်၏အမွေ၊ သင်၏သားမြေးတို့၏အမွေဖြစ်ရလိမ့်မည်”ဟု ကျိန်ဆိုလေ၏(ယောရှု၁၄:၉)။
ဘုရားရဲ့ကတိတော်ကို စွဲလမ်းခြင်းသည် ဘုရားကို ယုံကြည်စိတ်ချခြင်းဖြစ်တယ်။ ယုံမှားသံသယရှိခြင်း၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းသည် မယုံကြည်ခြင်းဖြစ်
သည်။ ဘုရားရဲ့ကတော်များကို စွဲလမ်းပြီးအသက်ရှင်သောသူက စိတ်ဓာတ်မကျပါ။ သူတပါးကိုလည်း အပြစ်မတင်ပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ကတိပေးသောဘုရားကို စိတ်ချလို့ဖြစ်တယ်။
၂။ ကာလက်သည် ကတိတော်အပေါ်မှာ မှန်ကန်သော စိတ်နေသဘောထား၊
ဣသရေလ (၁၂)မျိုးရဲ့ခေါင်းဆောင် (၁၂)ယောက်သည် ကတိတော်ပြည်ကို စူစမ်းရန်သွားပြီး ပြန်လာသောအခါ သူတို့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သော မောရှေအား သူတို့ မြင်တဲ့အရာ၊ အခြေအနေတွေကို ပြောပြကြသည်။ တခြားသော ၁၀ယောက်က ဣသရေလတမျိုးသားလုံး စိတ်ပျက်စရာစကားတွေပြောကြပေမယ့် ကာလက်က စိတ်ပျက်စရာ စကားလုံးတွေမပြောခဲ့ဘူး။
“….ထာဝရ ဘုရားသည် ငါတို့နှစ်သက်လျှင်၊ နို့နှင့်ပျားရည်စီးသော ထိုပြည်သို့ ငါတို့ကိုဆောင်သွင်း၍ အပိုင်ပေးမည်၊ သူတို့သည် ငါတို့အတွက် စားစရာဖြစ်မည်။ သူတို့၌ အမှီတကဲမရှိ။ ထာဝရဘုရားသည် ငါတို့ဘက်၌ရှိတော်မူ၏။ သို့ ဖြစ်၍ သူတို့ကိုမကြောက်ကြနှင့် ဆိုပြီး ” (တော ၁၄:၈၊ ၉)ဟု ကာလက်သည် အခြေနေအထက်တွင် ဘုရားရဲ့ကတိတော်ကို ဝန်ခံခဲ့သည်။
“ချက်ခြင်း ချီသွား၍ ထိုပြည်ကိုသိမ်းယူကြစို့။ အောင်နိုင်ကောင်းသည်ဟုဆို၍ မောရှေရှေ့မှာ လူများတို့ကို ငြိမ်းစေ၏။ (တောလည်ရာ ၁၃:၃၀))
ဒါဟာ ကာလက်က လှုပ်ယူကြိုးစားပြီးပြောနေတာမဟုတ်ပဲ သူရဲ့စိတ်၊သူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ယောရှု ၁၄: ၇ထဲမှာ ‘ကိုယ်စိတ်ထင်သည်အတိုင်း ပြန်ကြားလျှောက်ပါ ၏ လို့ဖော်ပြထားသည်။
၃။ ကာလက်သည် သူရဲ့ အခွင့်အာဏာကို အသုံးပြုသည်။
ယခုအချိန်မှာ ကာလက်သည် အသနားခံပြီးတောင်းနေတာမဟုတ်တော့ဘူး။ သူရပြီးသားကတိတော်အပေါ်မှာ သူရသင့်ရထိုက်သောအရာကို တောင်းလိုက်တာဖြစ်တယ်။ သို့ ရာတွင်မောရှေ စေလွှတ်သော နေ့၌ ခွန်အားရှိသကဲ့သို့ ယနေ့၌ရှိပါ၏။ ထိုအခါထွက်ဝင်ခြင်း အမှု၊ စစ်တိုက်ခြင်း အမှု ကို ဆောင်
ရွက်ခြင်းငှါ တတ်စွမ်းနိုင်သကဲ့သို့ ယခုလည်းတတ်စွမ်းနိုင်ပါ၏။ (ယောရှု ၁၄:၁၁)
သို့ ဖြစ်၍ ထိုနေ့၌ထာဝရဘုရား မိန့်တော်မူသော ဤတောင်ကို အကျွန်ပ်အားပေးပါ။ ဤတောင်ပေါ်မှာ အာနာကလူရှိကြောင်းကို၎င်း၊ ကြီးမား ခိုင်ခံ့သောမြို့တို့နှင့် ပြည့်စုံကြောင်းကို၎င်း၊ ထိုနေ့၌ကိုယ်တော်သည်ကြားရပြီ။ သို့ ရာတွင်ထာဝရဘုရားသည် အကျွနု်ပ်နှင့်အတူ ရှိတော်မူလျှင်၊ အမိန့်တော်ရှိသည်အတိုင်း ထိုသူတို့ကိုနှင်ထုတ်ခြင်းငှါ အကျွနု်ပ်တတ်စွမ်းနိုင် ပါသည်ဟု လျှောက်ဆို၏။ (ယောရှု ၁၄:၁၂)
ကိုယ်တော်သာအတူရှိရင် ရန်သူကို နှင်ထုတ်ဖို့ရန် သူလုံးဝတတ်နိုင်တယ်။ အသက် ၈၅ ရှိသော်လည်း အသက် ၄၀ တုန်းကလိုပဲ ခွန်အားရှိတယ်လို့ ကာလက်ကပြောခဲ့တယ်။ ဘုရားရဲ့ကတိတော်အမွေကို ရယူဖို့ ကာလက်သည် ဘယ်တော့မှ အားမလျော့ခဲ့ဘူး။ ထိုကတိတော်အတွက် အမြဲတက်ကြွလန်းဆန်းနေသောသူဖြစ်တယ်။
ကျွနုပ်တို့ယုံကြည်သူများသည်လည်း ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့် ရရှိသော ဘုရားသခင်၏ကတိတော်များကို ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် သိမ်းပိုက်ဖို့ဖြစ်သည်။
“ဂတိတော်တို့ကို အာဗြဟံနှင့် သူ၏ အမျိုးအနွှယ်၌ ထားတော်မူ၏။ အမျိုးအနွှယ်တို့ဟု အများသောသူတို့ကို ရည်မှတ်၍ မိန့်တော်မူသည်မဟုတ်။ သင်၏ အမျိုးအနွှယ်ဟု တယောက်သောသူကိုရည်မှတ်၍ မိန့်တော်မူ၏။ ထိုတယောက်သောသူကားခရစ်တော်ဖြစ်သတည်း။” (ဂလာတိ ၃:၁၆)
“ခရစ်တော်နှင့် စပ်ဆိုင်လျှင် အာဗြဟံ၏ အမျိုးအနွှယ်ပင်ဖြစ်၍၊ ဂတိတော်အတိုင်း အမွေခံ၏အရာ၌တည်ကြ၏။ “(ဂလာတိ ၃:၂၉)ကျွန်ုပ်တို့သည် ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင် အာဗြဟံ၏အမွေဖြစ်သော ဖြောင့်မတ်ခြင်းအမွေ၊ မျိုးဆက်အမွေ၊ စဉ်းစိမ်ဥစ္စာ အမွေ၊ ကျန်းမာခြင်းအမွေ၊ အသက်ရှည်ခြင်းအမွေကို ရရှိသောသူများဖြစ်ကြသည်။ ဒါကြောင့် ကာလက်ကဲ့သို့ အစမှ အဆုံးတိုင် ဘုရားရဲ့ကတိတော်များကို ယုံကြည်လျက် အမွေခံရဖို့ ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ….
Rev. Niang Lamh Kim (Ki Kim)